निर्यात २५ प्रतिशत बढ्यो, व्यापार घाटा सुधारियो – Nepal's No. 1 Digital Newspaper, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / अर्थ समाचार / निर्यात २५ प्रतिशत बढ्यो, व्यापार घाटा सुधारियो
By digitalkhabar on १९ आश्विन २०७६, आईतवार ११:५५
१९ असोज, काठमाडौं । निर्यात बृद्धिसँगै मुलुकको व्यापार घाटा घटेको पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको विवरणअनुसार आघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मुलुकको निर्यात २५.८७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै व्यापार घाटा गत वर्षको समिक्षा अवधिको तुलनामा ३.०५ प्रतिशतले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को दुई महिनामा नेपालले १४ अर्ब ६९ करोड ९० लाख २० हजार बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को दुई महिनामा १८ अर्ब ५० करोड १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो अवधिको तुलानामा २५.८७ प्रतिशतले बढी हो ।
यस्तै आयात भने १.२२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालले २ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख १२ हजारको आयात गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात २ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड ३६ लाख ९६ हजार मात्रै छ, जुन अघिल्लो आवको सही अवधिको तुलनामा १.२२ प्रतिशतले कम हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामासमग्र व्यापारको आकार भने ०.३९ प्रतिशतले बृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ४७ अर्ब ४ करोड ५६ लाख ३३ हजारको व्यापार यस वर्षको समिक्षा अवधिमा २ खर्ब ४८ अर्ब ५५ लाख लाख ५१ हजार कायम छ । भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरेकाअनुसार क्लिंकर र सिमेन्टसँगै इन्धनको आयातमा केही कमी आउनु र वनस्पति ध्यू, धागो तथा तयारी पोशाक निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटा सुधारिएको हो ।
Related ItemsBusinessDigital KhabarImport ExportNepal
← Previous Story सामसुङले किन बन्द गर्यो चीनमा रहेको मोबाइल कारखाना ?
Next Story → आइफोन ११ को माग उच्च, १० प्रतिशतले बढ्यो उत्पादन